İstanbul Yeni Havalimanı’nda Test Amaçlı İlk Yakıt Sevkiyatı Gerçekleşti – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulGaadiidka Cusub ee Cusub ee Cusub ee Istanbul
13 / 08 / 2018 34 Istanbul, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
Madaarka Cusub ee Istanbul, oo ah mid ka mid ah garoomada diyaaradaha yar yar ee markabka lagu dhoofin karo, ayaa la bilaabay markii ugu horreysay. Gaadiidka shidaalka ee ugu horreeya ee 63 kun tan oo loogu talagalay ujeeddooyinka baaritaanka waxaa lagu sameeyey IGA Shidaalka Biyaha ee IGA. Kharashka ugu sarreeya ee hawlgallada waxaa looga hortagayaa habka shixnadda, taas oo u baahan doonta isticmaalka gaadiidka gaadiidka 2250 haddii dhulka la sameeyo. Madaarka Cusub ee Istanbul ayaa lagu dejin doonaa oo kaliya badda.
Marka la dhammeeyo, 200 wuxuu noqon doonaa garoonkii ugu weynaa aduunka oo leh malaayiin rakaab ah, garoonka diyaaradaha ee New York waa mid kale oo ka horreeya maalinta 80. Gaadiidka ugu horreeya ee 63 kun tan ayaa loo sameeyey ujeeddooyin tijaabo ah oo ka yimid IGA Shidaalka Shidaalka ee IGA, kaas oo loo asaasay shidaalka si loo siiyo badda si halkii waddo.
HDI Shiidaalka Supply Port, feature in uu leeyahay laba jeer awooda shidaalka ee garoomada diyaaradaha ee orso oo Turkey ah!
Shidaalka tijaabada kowaad ee laga helay saliida Petrol Ofisi ayaa loo wareejiyay taangiyada shidaalka lagu rakibay meel u dhow dekedda. 116 kun oo metric LR2 leeyihiin Pioneer awoodda shidaalka waa markab, HDI Shiidaalka Supply Port xirtay 63 kun oo tan oo km 12 shidaalka dhuun dheer oo ku yaalla Garoonka New Istanbul, iyo shidaalka lagu wareejiyay taangiga, kaas oo labo jeer waa size ee awoodda madaarada shidaalka ee Turkey. Thanks to gaadiidka badda, hawlgal ayaa la qabtay iyada oo aan loo baahnayn isticmaalka gaadiidka gaadiidka 2250 ee wadada isaga oo aan lahayn qarash badan.
IGA Dukumiintiga Shidaalka Shidaalka ah: Sanadkiiba 6 wuxuu leeyahay awood malaayiin mitir kiilo ah oo shidaal ah
Iyada oo ay kaabayaashu siiyaan badda, IGA Dekadda Berbera waxay leedahay faa'iido ay leedahay in shidaal laga qaado dhamaan gobollada aduunka oo leh kharash macquul ah. Thanks to dekadda, sahayda shidaalka iyo amniga sugidda ayaa laga heli doonaa gobollada qiimaha saldhiga shidaalka ku haboon yahay. IGA Port Supply Port waa hanti sannadeed oo qiyaastii ah 6 malyan mitir cubic oo shidaal ah. Thanks to the sea, 8 bin 571 waxay awoodi doontaa in ay buuxiso 3 isla mar ahaanteed, iyada oo aan loo baahnayn in lagu safro waddo. Dukumiinti waxay u adeegi doontaa sida habka 7 u buuxin karto saacadaha 24.
Isticmaalka shidaalka maalinlaha ah ee Maddaarka cusub ee Istanbul wuxuu noqon doonaa mitir kun oo mitir oo mitir ah!
H. Kadri Samsunlu, Madaxa Sare ee Maamulka iyo Agaasimaha IGA Airport
"Waxa uu hoosta ka xariiqay in Madaarka cusub ee Istanbul uu yahay mid ka mid ah garoomada diyaaradaha yar ee adduunka oo la siin karo maraakiibta miisaanka, ayuu yiri:" Waxan maalgashanaynaa maalin kasta oo ka mid ah garoonka diyaaradaha ee Istanbul. Waxaan kufaraxsanahay inaan arko in shixnadii hore ee shidaalka ay ka mid tahay mashruucyada ugu muhiimsan ee mashruuca. Waxaan rajeyneynaa in adeegga shidaalka ee adeega shidaalka ee diyaaradaha aan la fureyno madaarkeena, 13 kun mitir oo mitirka 200 oo shidaal ah ayaa loo baahan yahay maalin kasta. Haddii shidaalka loo keenay Garoonka Diyaaradaha ee Istanbul ee cusub, wadooyinka caadiga ah ee 315 waxay ku jiri doonaan gudaha iyo dibedda. Iyadoo tixgelineysa in xaaladdani ay keeni doonto kharashaadka iyo khidmadda hawlgalka iyada oo keenaysa shidaalka badda iyada oo ay sabab u tahay culeys dheeraad ah oo keenaya gaadiidka Istanbul, waxaannu bilaabay IGA Dammaanadda Biyaha ee Shidaalka ah. Sidan oo kale, waxaan hoos u dhignaa kharashka gaadiidka by 41% iyada oo la adeegsanayo shidaalka shidaalka ee madaarka cusub ee Istanbul. Shidaalka, oo laga saari doono badda kaliya hal mar, waxaa kaliya oo dhulka la siin karaa gaadiidka gaadiidka 2250. Markaan tixgelineyno tiradan, waxaan siineynaa dhismooyin muhiim ah oo ka sii muhiimsan oo leh shidaalka oo laga helo badda. Waqtiga kaydka, qiimaha kharashka iyo amniga shaqada ee ay ka heleen sahayda marin-hawleedka ayaa siin doona wax-qabad wanaagsan oo qaliinka ah iyo inagoo adeegsanayna fahamkeena ku-fiicnaanta howl-galka. "
Shirkadda Ruushka Gazprom waxay u keentaa Shiinaha LPG Shiinaha dhanka Tareenka
Ganacsi weyn ayaa dhacay! Madaarka Sabiha Gokcen
Kardemir ayaa billaabi doonta duullimaadyada Iran
Gaadiidka Interpipe ee Sacuudi Carabiya
DHL oo soo bandhigtay shixnad xamuul ah
Saldhiggii koowaad ee baddan ayaa ka dhacay Marmaray
Ku dhawaaqida qandaraaska: Diyaarinta mashaariicda kaabayaasha waxaa loo adeegsan doonaa si heersare ah
IGA Dukumiintiga Shidaalka Biyaha
Gaadiidka Shidaalka ee Garoonka Diyaaradaha ee Istanbul
Isticmaalka shidaalka maalinlaha ah ee Maddaarka cusub ee Istanbul
Caqabado ayaa ku soo koraya Gaziantep
"Dhimashada Hazard Istanbul ee Maddaarka Cusub ee Istanbul